🥇 ▷ Dib-u-habeynta: Windows 10 shaashadda gelitaanka waa mid gaabis ah, xajin ama qabow ✅
Dib-u-habeynta: Windows 10 shaashadda gelitaanka waa mid gaabis ah, xajin ama qabow
Mid ka mid ah xaaladaha ugu xanuunka badan ee kumbuyuutar kasta oo adeegsada waa marka ay shaashadda soo galaan Windows 10 gaabis ah, dhejis ah, qabow dhibaato.
Markay taasi dhacdo, adeegsadayaasha badankood ma yaqaanaan sida loo xaliyo dhibaatada, laakiin labada xuluul ee ugu dhakhsaha badan waxay noqon lahaayeen in dib loo bilaabo ama la isku dayo in la furo Maamulaha Task furayaasha Ctrl + ALT + DELETE.
Haddii aad kala kulanto shaashadda gelitaanka Windows 10 gaabis ah, dhibaato dheelitiran oo barafaysan kombiyuutarkaaga, halkan waxaa ah xalal kaa caawinaya inaad ku xalliso si qarsoodi ah.
Sidee baan u xallin karaa arrimaha gelitaanka shaashadda ee deg degga ah, xayiraadda iyo qaboojinta ee Windows 10?
1. Bootin hab nabdoon
Qaabka badbaadada leh wuxuu ku bilaabaa kombiyuutarkaaga faylasha xaddidan iyo wadayaasha laakiin Windows Wali wuu sii shaqeyn doonaa. Si aad u ogaato inaad ku sugan tahay xaalad nabdoon, waxaad ku arki doontaa ereyada geeska shaashadda.
Haddii shaashadda soo gelitaanka ee Windows 10 uu gaabis yahay, xajisan yahay oo dhibaatadda qaboobuhu ku sii jirto, hubi haddii ay dhacdo inta kombuyuutarkaagu shaqeynayo Qaabka Nabdoon.
Raac tillaabooyinkan si aad ugu bilowdid kumbuyuutarkaaga qaab nabdoon:
Guji Bilow badhanka
Xullo Xeerarka – Sanduuqa Settings ayaa furmi doona
Guji Cusboonaysiinta iyo amniga
Xullo Soo kabashada
In la tago Biloow horumarsan
Guji Dib u bilow hadda
Xullo Xallinta masalooyinka ka Xulo ikhtiyaar shaashadda ka dib guji Xulasho Horumarineed
In la tago Dejinta bilowga oo guji Dib u Bilow
Marka kombiyuutarkaagu dib u bilowdo, liiska xulashooyinka ayaa soo bixi doona.
Xullo 4 ama F4 si aad ugu bilowdo kumbuyuutarkaaga qaab nabdoon
Haddii aad dhib ku qabtid furitaanka barnaamijka Dejinta, fiiri maqaalkan si aad u xalliso arrinta.
Qaabka ugu dhakhsaha badan ee lagu galo “Badbaado” waa in dib loo bilaabo kombiyuutarka ka dibna la sameeyo waxyaabaha soo socda:
Laga soo bilaabo Xulo ikhtiyaar shaashadda dooro Cillad-deji> Xulasho Horumarineed> Saaritaan Bilow> Ku-Bilow
Haddii shaashadda gelitaanka ee Windows 10 uu yahay mid gaabis ah, ku dhegan, dhibaato qabow aan la haynin inta uu ku sugan yahay Xaaladda Nabdoon, markaa dejineedyadeeda caadiga ah iyo wadayaasha aasaasiga ahi kama qaybqaataan dhibaatada.
Tani ma caawisay? Haddaysan ahayn, isku day xalka xiga.
Qaabka aaminka ah uma shaqeeyo Windows 10? Ha argagixin, tusmadan ayaa kaa caawin doonta inaad ka gudubto dhibaatooyinka bilowga ah.
2. Samee kabo nadiif ah
Haddii aad ku bilaabi karto xaalad aamin ah, fadlan samee kabo nadiif ah si aad uga saarto wixii khilaafyo kombiyuutar ah oo sababi kara shaashadda soo gelitaanka Windows 10 gaabis, xayiraad, dhibaato qabow.
U sameynta kabahaaga nadiifka ah kombuyuutarkaaga wuxuu yareynayaa khilaafyada software-ka la xiriira ee muujin kara sababaha dhibaatada. Khilaafaadkan waxaa sababi kara codsiyada iyo adeegyada bilaabaya iyo gadaal gadaal markasta oo aad Windows bilowdo badanaa.
Sida loo sameeyo kabaha nadiifka ah
Si aad si guul leh ugu gudato kabaha nadiifka ah ee Windows 10, waxaad ubaahantahay inaad gasho sidii maamule, ka dibna raac talaabooyinkan:
Tag sanduuqa raadinta
Xullo Qaabeynta nidaamka
Soo hel Adeegyada carrab
Xullo Qari dhammaan adeegyada Microsoft sanduuq
Guji Dhammaantood gabi
In la tago Bilow carrab
Guji Maareeyaha howsha ayaa furan
Xir Maareeyaha Hawsha ka dibna dhagsii Waa hagaag
Dib u bilaw kumbuyuutarkaaga
Waxaad yeelan doontaa jawi kabo nadiif ah ka dib markaad si taxaddar leh u raacdid dhammaan tallaabooyinkan, ka dib waxaad isku dayi kartaa inaad hubiso haddii dhibaatadu meesha ka baxday.
Haddii aad rabto inaad ogaato sida loogu daro ama looga saaro codsiyada bilowga ah ee Windows 10, eeg tilmaamahaan fudud.
Ma furi kartaa Maareeyaha Hawsha? Ha walwelin, waxaan kuu heynaa xalka saxda ah adiga.
3. Si ku-meel-gaar ah u joojin qalabka-dabka iyo barnaamij kasta oo ka hortagga ama barnaamijyada ka hortagga ah
Mararka qaarkood inaad haysato guluub fara badan, fayras, ama barnaamijyada antiestware-ka ayaa kaa horjoogsan kara inaad qabato shaqooyinka qaarkood ama socodsiinta kumbuyuutarkaaga.
Haddii tani ay tahay sababta dhibaatada, inta aad wali kujirto xaalad aamin ah, si ku meelgaar ah u dami mid ka mid ah saddexda oo iskuday mar labaad inaad gasho.
Hubso inaad dib u hawlgaliso barnaamijyadan isla marka aad dhammeysato ka hor si aad uga hortagto haakariska, fayrasyada, iyo dirxiyeyaasha in ay waxyeelleeyaan nidaamkaaga.
Ma rabtaa inaad hubiso haddii Firewall uu ku shaqeynayo shaashadda gelitaankaaga? Halkan ka daawo qoraalkan si aad u ogaato sida.
4. Dib-u-deji gacan qabashada qaybaha Windows Upgrade
Afeef: Xalkan waxaa kujira talaabooyin qeyb ka ah dib u habeynta diiwaanka. La soco in dhibaatooyin daran ay dhici karaan haddii aad sidan si qalad ah u sameysid. Hubso inaad raacdo tallaabooyinkaan si sax ah oo taxaddar leh.
Fadlan dib u dhig diiwaanka kahor intaanad wax ka beddelin, ka dibna soo celi haddii dhibaato dhacdo. Raac tillaabooyinkan si aad gacanta ugu dhigto Windows Qaybaha cusboonaysiinta:
Badhanka midig ee jiirka Bilow
Xullo Taliska Taliska (Maamulaha)
Guji haa markii la weydiiyay rukhsad
Jooji BITS, Cryptographic, Installer MSI iyo Adeegyada Cusboonaysiinta Windows adiga oo ku qoraya amarrada soo socda amarkii degdegga:
qaniinyada joojinta saafiga
riix Soo gal kadib amar kasta oo aad qortid
Magacaabi faylka “SoftwareDistribution and Catroot2” adoo ku qoraya amarada hoosta ku yaal Calaamadaha nidaamka ka dibna riix Soo gal kadib amar kasta oo aad qortid:
Ren C: Windows software Qaybinta SoftwareDistribution.old
Dib-u-bilaw BITS, Cryptographic, MSI Installer iyo Adeegyada Cusboonaysiinta Windows adiga oo ku qoraya amarrada soo socda gudaha Calaamadaha nidaamka:
Nooc Ambabbax amarka amarka si loo xiro
Isku day inaad mar kale socodsiiso Windows Refreshhes si aad u hubiso haddii shaashadda gelitaanka ee Windows 10 gaabis ah, ku dhegan tahay, dhibaato qabow la xaliyay.
Xusuusin: Lama dabiibo Iga sii cusboonaysiinta waxyaabaha kale ee Microsoft marka aan cusboonaysiiyo Windows Xulashada kor u qaadista. Soo dejista Windows-ka oo rakib cusbooneysiinta lagama maarmaanka u ah in Windows si hufan looga shaqeeyo.
Haddii aad dhib ku qabtid helitaanka Taliska Taliska sida maamule ahaan, waxaad si fiican u fiirineysaa tilmaamahaan.
5. Beddel goobaha diiwaanka
Waa tan sida loo sameeyo, laakiin ka taxaddar inaad raacdo tilmaamaha sida ay yihiin:
Xullo in la ordo
riix Soo gal
In la tago HKEY_CURRENT_USER SOFTWARE Siyaasadaha Microsoft Windows Nooca hadda ah Soo riix ogaysiisyada
Waad arki doontaa NoToastApplicationNotification
Beddel qiimaha aad 1 (default) a 0
Guji Waa hagaag
Ka bax, ka dibna mar labaad soo gal
Haddii tani aysan hagaajin shaashadda gelitaanka ee Windows 10 gaabis ah, dhegan, dhibaato qabow, isku day xalka ka hooseeya.
Hadaadan tafatiran karin duubistaada Windows 10, fiiri tusahan kaas oo kaa caawin doona inaad ka adkaato dhibaatadan.
Miyaadan heli karin Tifaftiraha Diiwaanka? Waxyaabaha ma ahan kuwo cabsi badan sida ay umuuqdaan. Fadlan tixraac tilmaamahan oo si dhaqso leh u xalli arrinta.
6. Hubi Daawashada Dhacdada
Viewer Event wuxuu muujin karaa waxa keenaya shaashadda gelitaanka Windows 10 gaabis, xayiraad, dhibaato barafeysan. Dhibaatada noocan oo kale ah waxay u dhici kartaa iyada oo ay ugu wacan tahay isbedelada dhowaa ee software ama qalabka.
Waa tan sida loo sameeyo tan:
Xullo Daawashada dhacdooyinka
Ballaarin Diiwaanada Windows qeybta bidix
Guji Diiwaangelinta dalabka ka dib muuji dhacdada ugu horeysa galka isla markaana isticmaal furayaasha fallaadho si aad ugu xoqo. Waxaad ka heli kartaa diiwaanno leh digniino jaale ah ama khaladaad casaan ah.
Hadaad aragto a cayayaanka casaanka, labalaab guji si aad u soo qaadatid ka dibna nuqul ka sameyso waxa kujira dukumenti
Ma rabtaa waxyaabo kale oo badan? Waa kuwan kuwa ugu fiican. Daawadayaasha barnaamijka Windows 10 ee daawadayaasha ayaa hadda jira.
7. Orod Qalabka Dayactirka Dayactirka Nidaamka
Tani waxay xalisaa inta badan dhibaatooyinka nidaamka guud. Raac tillaabooyinkan si aad u sameysid mushkiladda dayactirka nidaamka:
Aad sanduuqa goob baarida iyo nooca Xalinta dhibaatada
Guji Xalinta dhibaatada
Guji Nidaamka amniga
Guji Dayactirka nidaamka
Guji ku xiga
Raac tilmaamaha si aad u socodsiiso mushkilad dayactirka nidaamka.
Haddii mushkiladdu joojiso kahor dhammaynta hawsha, ku hagaaji iyada oo la kaashanayo hagehan dhammaystiran.
8. Samee dayactir otomatik ah
Si tan loo sameeyo, waxaad u baahan tahay inaad kala soo baxdo Windows ISO 10 ka dibna aad abuurto aalad abuur warbaahinta, oo aad ka sameyn karto kumbuyuutar kale.
Markaad haysato qalabka rakibaadda, raac tillaabooyinka hoose:
gal Windows Installation disk ama USB drive, ka dibna kombiyuutarkaaga dib u bilow. Waxaad arki doontaa farriin ku weydiinaysa inaad Riix fure kasta oo aad ku gashid DVD.
Riix fure kasta oo aad ku gashid DVD
Markaad aragto Ku rakib kombuyutarka Windows bogga soo muuqday guji Dayactir kombuyutarkaaga si loo bilaabo Deegaanka Windows Recovery (WinRE)
WinRE, tag Xulo ikhtiyaar shaashadda
Guji Xallinta masalooyinka
Guji Xulasho Horumarineed
Guji Dayactirka otomatiga ah
Macluumaad dheeri ah oo ku saabsan abuurista USB USB bootable Windows Windows ku yaal, fiiri tusahan faahfaahsan. Qalabka abuurka warbaahinta ma shaqeeyo Windows 10? Ha walwelin, waxaan heysanaa xalka saxda ah.
Ku dheji garaashka gaariga? Ha walwelin, waxaan kuu bilaabi doonnaa qaab nololeedkan cajiibka ah adiga.
Xusuusin: Haddii aadan arkin farriinta Riix fure kasta oo kabilaabanaya DVD-ga, waa inaad ka beddeshaa nidaamka boot-ka ee nidaamka BIOS-gaaga si aad uga bilowdo disk-ga ama USB-ga.
Ka taxaddar markaad beddeleyso goobaha BIOS maaddaama habka loo yaqaan ‘BIOS interface’ loogu talagalay dadka isticmaala kombuyuutarrada horumarsan maadaama aad beddeli karto dejinta ka horjoogsaysa kombiyuutarkaagu inuu si habboon u bilowdo.
Waa inaad cusboonaysiisaa kaliya BIOS markii loo baahdo, sida marka aad xallineyso arrin isku waafaqid. Waxay noqon kartaa wax caqli gal ah oo ka tagi kara kombiyuutarkaaga mid aan la aqbali karin haddii wax khaladaad ah dhacaan.
Raac tillaabooyinka hoose sida saxda ah ee ay yihiin inay wax ka beddelaan amarka boot ka dibna ay sameeyaan dayactir:
Habka dib-u-bilaabida, hubi tilmaamaha ku saabsan sida loo carqaladeeyo bilawga caadiga ah
Gali Qalabka dejinta BIOS. Inta badan kumbuyuutarradu waxay isticmaalaan F2, F10, ESC, ama fure DELETE si ay u bilaabaan dajinta
Ka eeg tab tabka qalabka korantada ee loo yaqaan ‘BIOS set utility’ oo lagu calaamadeeyay Amarka Boot, xulashada kabaha ama kabaha
Adeegso furaha fallaaraha si aad u aado Amarka bilow
Meel ku yaal aaladda laga saari karo (CD, DVD, ama USB flash drive) ee kujira Liistada
U adeegso furaha fallaaraha si aad ugu dhaqaaqdid unugga oo u muuqda kan ugu horreeya ee liiska bootka
Qaabka isku xigxigeyga boot ayaa hada loo badalay kabo laga soo qaatay DVD, CD ama USB flash drive
riix F10 si loo keydiyo isbeddelada oo looga baxo adeegsiga kaydinta BIOS
Guji haa daaqadaha xaqiijinta
Kombuyuutarkaagu si caadi ah ayuu dib u bilaaban doonaa
U oggolow in baaristu sii socoto dhowr daqiiqo si aad uga saarto wixii kombiyuutarka ku faafa
Xulo luqadda aad doorbideyso, lacagta, waqtiga, keyboard, ama qaab kale oo galitaan ah
Guji Dayactir kombuyutarkaaga
Xulo nidaamka qalliinka aad rabto inaad dayactir ku sameyso (kiiskan Windows 10)
Gudaha Xulo ikhtiyaar shaashadda dooro Xallinta masalooyinka
Xullo Xulasho Horumarineed
Guji Dib-u-soo-celinta nidaamka ama hagaajinta bilowga
Mar haddii dayactirka la dhammeeyo, hubi haddii shaashadda soo gelitaanka ee Windows 10 uu gaabis yahay, xajisan yahay oo dhibaatadii qaboobaaba baaba’aan; haddii kale, isku day xalka soo socda.
Helitaanka BIOS ma waxay u eg tahay hawl weyn? Noo ogolow inaan kuu fududeyno waxyaabaha kuu fudud anagoo adeegsaneyna tusmadaan yaabka leh!
9. Orod Scanner Badbaadada Microsoft
Baadhitaanka Amniga Microsoft waa aalad loogu talagalay in lagu helo oo laga saaro fayraska kombiyuutarka Windowsware kaliya marka la adeegsanayo baaritaan, ka dib waad isticmaali kartaa 10 maalmood ka dib soo dejinta.
Taas macnaheedu waa inaad soo degsato nooca ugu dambeeyay ee qalabka ka hor intaadan kumbuyuutar kasta ku samayn kombiyuutarkaaga.
Si kastaba ha noqotee, Qalabka Baadhitaanka Nabdoonaanta Microsoft ma beddelayo barnaamijkaaga anti-malware. Waxay kaa caawineysaa in laga saaro barnaamijyada kombiyuutarka xaasidnimo kombiyuutarkaaga Windows 10.
Waa tan sida loo socodsiinayo Scanner Security Microsoft:
Xulo nooca skaanka aad rabto inaad ordo
Dib u eeg natiijooyinka sawirka shaashadda, kaas oo liis gareynaya dhammaan waxyaabaha kujira kombiyuutarkaaga
Si aad uga saarto qalabka baarista nabadgelyada ee Microsoft, tirtir msert.exe faylka caadiga ah. Hubi haddii shaashadda gelitaanka ee Windows 10 ay tahay mid gaabis ah, xajmi badan, dhibaatada qaboojiyaha ahna ay sii jirto. Hadday sidaas tahay, isku day xalka xiga.
Si toos ah ugu samee Windows scan Def system scan buuxa! Baro sida loo sameeyo adiga oo akhrinaya maqaalkan waxtar leh.
10. Orod Nidaam Hubiyaha Nidaamka (Scan Scan)
In kasta oo ay wali kujirto xaalad amaan ah, waxaad qaadi kartaa talaabooyinka soo socda si aad iskudaydo inaad xalliso shaashadda gelitaanka Windows 10 gaabis ah, xayiran, dhibaato qabow:
Ku dhaqaaq baarista Nidaamka Hubinta Nidaamka (SFC)
Ku wad aaladda DISM
Sida loo wado skaanka SFC
Sawir-qaabeedka Nidaamka Baaritaanka Nidaamka wuxuu hubiyaa dhammaan faylalka nidaamka la ilaaliyo ka dibna wuxuu ku beddelaa noocyadii khaldanaa noocyadii asalka ahaa iyo kuwii saxda ahaa ee Microsoft. Waa tan sida loo sameeyo tan:
Aad sanduuqa goob baarida iyo nooca CMD
Xullo Calaamadaha nidaamka
Midig riix oo dooro U dil maamul ahaan
Nooc sfc / scannow
Amarkii fandhaalka miyaa la joojiyay kahor howshu? Ha walwelin, waxaan kuu heynaa xallin sahlan adiga.
Sida loo maamulo qalabka DISM
Haddii aad wali hesho shaashadda soo gelitaanka ee Windows 10 gaabis ah, dhejis ah, dhibaato barafaysan, orda qalabka loo yaqaan ‘DISM tool’ ama Qalabka Maamulka Maaraynta.
Aaladda DISM waxay gacan ka geysaneysaa hagaajinta khaladaadka musuqmaasuqa ee Windows markii Windows Updates iyo xirmada adeegga aan la rakibin khaladaadka musuqmaasuqa, sida haddii aad leedahay faylka nidaamka musuqmaasuq.
Waa tan sida loo maamulo amarrada DISM-ga ee kumbuyuutarkaaga si aad u aragto haddii ay waxtar leedahay:
Sanduuqa goob baarida, ku qor CMD
Guji Calaamadaha nidaamka liiska natiijooyinka raadinta
Nooc Dism / Khadka Tooska ah / Sawirka Nadiifinta / Soo celinta Caafimaadka
Mar haddii dayactirka la dhammeeyo, dib u bilaw kumbuyuutarkaaga oo hubi haddii dhibaatadu sii socoto.
Waxay umuuqataa inay wax walba lunsan yihiin markii DISM ay ku dhacdo Windows 10? Hubi tilmaamahan deg-degga ah oo walwalka ka saar.
Haddii qaab nabdoon uu xasilloon yahay, markaa dhibaatadu waxay u badan tahay wadayaasha, laakiin kombiyuutarkaagu sidoo kale wuxuu ubaahan karaa inuu baabi’iyo ama hagaajiyo faylalka nidaamka sida dhibaatooyinka badankood ee Windows 10 waa arrimo musuqmaasuq hore uga jiray nidaamiyadii hawlgalka ee hore.
Xaaladdan oo kale, adigoo weli ku jira xaalad nabdoon, samee waxyaabaha soo socda:
Tag sanduuqa raadinta iyo nooca Si aad u cusbooneysiiso
Guji Raadi cusbooneysiinta si loo hubiyo loona dardar geliyo cusbooneysiinta ugu muhiimsan ee waqti qaadata si loo soo dajiyo
Badhanka midig ee jiirka Bilow badhanka
Xullo Maamulaha aaladda
Keen kombuyutarada ama websaydha soo saare darawallada maqan ama khaldan
Dhibaato ma ku qabtaa cusboonaysiinta Windows 10-kaaga? Fiiri tilmaamahaan si ay kaaga caawiyaan inaad xalliso iyaga waqti la’aan.
Ma ogtahay in inta badan isticmaalayaasha Windows 10 ay leeyihiin darawalada gaboobay? Hore ugu qaad tusahan.
Sidoo kale qaab badbaado leh, soo degso, rakibi oo diidi nooca tijaabada ah ee Malwarebytes iyo nadiifiyeyaasha adware, ka dibna cusbooneysiiya oo socodsiiya baaritaan buuxa. Hubso inaad uninstall barnaamijyada antiatware-ka bloatware isla markaana aad karti u yeelatid astaamaha lagu dhisay Windows Defend si loo tijaabiyo waxqabadka PC-gaaga.
Marka waxa kor lagu amro, samee waxyaabaha soo socda:
Badhanka midig ee jiirka Taskbar
Xullo Maareeyaha Hawsha
Gudaha Bilow tab, curyaam wax kasta illaa rakibaaddaadu xasiliso
Dib u soo celi kaliya waxaad u baahan tahay oo ay ku jiraan Windows
11. Samee nidaam soo celinta
Haddii aad hesho shaashadda gelitaanka Windows 10 gaabis ah, dhejis ah, barafaysan ka dib cusboonaysiinta, isticmaal Nidaamka Soo-celinta si aad u abuurto dhibco soo celinta markaad rakibayso codsiyada cusub, darawalada ama cusboonaysiinta Windows, ama markaad abuurto dhibco soo celinta gacanta.
Isku day oo soo celiya nidaamkaaga adoo raacaya tillaabooyinka hoos ku qoran oo eeg haddii ay caawinayso:
Guji Gudiga Kontaroolada
Guji Soo celinta nidaamka
Guji Xulo goob soo celin oo ka duwan
Guji dhibic soo celinta oo la abuuray ka hor intaadan la kulmin dhibaatada
Kama furi kartid Khadka Xakamaynta Windows 10? Fiiri tilmaamaha-talaaba-talaabada ah ee lagu xallinayo xalka.
Haddii Nidaamka Soo-celinta uusan shaqeynaynin, ha argagixin. Fiiri tilmaamahan waxtar leh isla markaana waxyaabaha mar labaad hagaaji.
Soo celinta ma saameynayso feylashaaga shaqsiyeed. Si kastaba ha noqotee, waxay ka saartaa codsiyada rakiban, darawalada, iyo cusbooneysiinta ka dib abuurista dhibic soo celinta.
Si kastaba ha noqotee, haddii aad la kulanto qalad muhiim ah oo Windows aad tirtirto dhammaan faylashaada habka socodka, ha argagaxin weli. Wax badan ayaan ka qornay arrintan oo tusahayaga hubaal wuu kaa caawin doonaa inaad ka soo kabato faylashaadii oo dhan.
Si aad ugu laabato dhibic soo celinta, samee waxa soo socda:
Xullo Gudiga Kontaroolada
Sanduuqa baarida koontaroolka, nooca Soo kabashada
Guji Soo kabashada nidaamka furitaanka
Xullo dhibic soo celinta ee la xiriirta barnaamijka / dalabka dhibaatada, darawalka ama cusboonaysiinta
Hadaad xiiseyneyso inaad waxbadan ka ogaato sida loo abuuro dhibic soocelin iyo sida ay kuu caawin karto, fiiri maqaalkan fudud si aad u ogaato waxkasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato.
Xalka 12: socodsii nadiifinta diskiga
Ka hor intaadan tan sameyn, hubi inaad haysatid meel kufilan diskiga kufilan Windows Drive. Waa tan sida loo socodsiinayo nadiifinta diskiga:
Sanduuqa goob baarida, ku qor nadiifinta diskiga
Xullo Nadiifinta Disk natiijooyinka raadinta
Sanduuqa xulashada diskiga diskiga ayaa soo bixi doona.
Guji Waa hagaag si loo bilaabo hawsha xisaabinta booska diskka
In la tago Guryaha> Qalabka> Hubinta qaladka
Calaamadee sanduuqa oo guji in la ordo
Dhibaato ma ku qabtaa inaad ka saarto dhammaan faylashaada junk? Raac tilmaamahan si aad u xalliso dhibaatooyinka nadaafadda diskka oo aad u badbaadiso wadistaada.
Sida looga baxo qaab nabdoon ka dib hagaajinta shaashadda gelitaanka Windows 10 gaabis ah, dhejis ah, dhibaato barafaysan
Markaad hagaajiso shaashadda gelitaanka Windows 10 gaabis ah, dhejis ah, dhibaato qabow, fadlan ka bax qaab nabdoon adoo isticmaalaya tillaabooyinka hoose:
Daaqad soosaarid ah ayaa furmi doonta
Tag tagga Boot carrab
Kala-bax ama ka-tag Hubso ikhtiyaarka boot sanduuq
Mid ka mid ah xalalkaan miyay shaqeeyeen hagaajinta shaashadda soo galitaanka? Windows 10 gaabis ah, dhegan, dhibaato qabow kombiyuutarkaaga? Nala soo socodsii qeybta faallooyinka ee hoose.
Sidoo kale, uga tag wixii kale ee ra’yi ama su’aalo ah ee aad ka qabtid halkaas waxaana hubin doonnaa inaan dib u eegno.
Ka socota tifaftiraha Xusuus-qorka: Booskan waxaa markii hore la daabacay Noofambar 2017 oo tan iyo markii la cusbooneysiiyay ku habboon iyo saxnaan ahaanta.
XIDHIIDHKA LA XIRIIRA BILAHA